Promotions & News - Yangon International Medical Services
Call Us at +9595105105 +95973157077
ဧပြီလ၊၂၀၁၈လကုန်အထိဘတ်၁၀၀တန်ကူပွန်လက်မှတ်နှင့်ဖုန်းဆင်းကဒ်အစီအစဉ် Yangon International Medical Services (YIM) ဘမ်ရွန်ဂရက်မြန်မာပြည်ရုံးများမှတဆင့် ဘမ်ရွန်ဂရက်ဆေးရုံကြီးသို့သွားရောက်ဆေးကုကြမည့် မြန်မာလူနာတိုင်းအား သင်္ကြန်အခါသမယအထူးမေတ္တာလက်ဆောင် အဖြစ် ဘတ်၁၀၀ တန်ကူပွန်လက်မှတ်(၂ ) စောင် နှင့်ဖုန်းဆင်းကဒ်များကို ဧပြီလ၊၂၀၁၈ အထိနောက်ဆုံးထားကာပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။။
ဘတ် ၁၀၀ တန်ကူပွန်လက်မှတ်အား
Yangon International Medical Services ဘန်ကောက်ရုံးခွဲ (မြန်မာလူနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့)တွင်YIM ၏၀န်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် အလည်အပတ်ခရီးစဉ်များ၊ အငှားကားများငှားရမ်းခြင်း၊ ဂိုက်ငှားရမ်းခြင်း၊ဖုန်းကဒ်နှင့်ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ခြင်း၊လေယဉ်လက်မှတ်လှဲခြင်းအစ ရှိသည်တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး
ကျန်တစ်စောင်ကို ဘန်ကောက်မြို့ရှိYangon International Medical Services (YIM) ဘမ်ရွန်ဂရက်မြန်မာပြည်ရုံးမှဖွင့်လှစ် ထားသောမြန်မာစားသောက်ဆိုင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Stay connected with your love one
အချစ်ဆုံးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့ ဘမ်ရွန်ဂရက်ဆေးရုံကြီးရဲ့ မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Y.I.M Services ကနေပြီးဆေးရုံအပွိုင့်မန့်ယူတဲ့သူအားလုံးကိုအခမဲ့ဆင်းမ်ကဒ်များပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်း
ကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ။ အခမဲ့ဆင်းမ်ကဒ်အပြင်ဘန်ကောက်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာUberစီးရင် ဘတ်၁၀၀လျော့ဈေးလည်းရရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
No matter where we are, we can stay healthy and stay connected with our love one.
Established in 2006, Yangon International Medical Services isaprivate Myanmar company limited that offers Myanmar patients competent and effective health care services at different levels; both clinical services and referral services of Bumrungrad International Hospital. The company operates in major cities across Myanmar and in Bangkok.
Address : New Excellent Condominium GF A, No 46/A, Pantra Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar
Tel : 01-378478 ,09-7310 5953, 09-510 510 5, 09-7315 7077
© 2021 YIM Services. All rights Reserved.